करोडपति बन्ने सजिलो उपाय ! यसरि बन्नुस करोडपति « News24 : Premium News Channel
करोडपति बन्ने सजिलो उपाय ! यसरि बन्नुस करोडपति
एजेन्सी । पैशा सबथोक होईन तर केही त अवश्य हो भनिन्छ । हो हरेक व्याक्तिको चाहाना एकदमै धनि बन्ने हुन्छ यदि तपाईपनि धनि बन्न् यानकि करोडपति बन्न चाहनुहन्छ भने पढ्नुस यी ८ काम बारे जसद्वारा मानिस केहि समयमा नै करोडपति बन्न सक्छ ।
घरमा आरामले तपाई ब्लगबाट करोडौ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ यसको लागी तपाइको रचनात्मक लेखन हुनुपर्छ । प्रख्यात वेबसाइट बिजनेस इनसाइडरको अनुसार २०१६ साल ब्लगबाट पैसा कमाउनको लागि सबैभन्दा राम्रो स्रोत बनेको छ । तपाइलाई बताईदिउ कि वायरलनोवा ब्लगको सुरुवात गर्ने सकॉट डीलांगले जम्मा ८ महिनामा करोडौ कमाएका थिए । सबै पेजमा आउने गुगल याडको कारणले उनको आम्दानी धेरै बढेको थियो।
आजकलको समयमा बिना कुनै क्वालिफिकेसन छिटो पैसा कमाउने सजिलो माध्यम बनेको छ यूट्यूब। बस तपाइको साथमा छिन भरमै भाइरल हुनेवाला भिडियो बनाउने बिशेसता हुनु आवस्यक छ । वर्ष २०१५/१६ मा पिउडीपाई,जो गेमिंग भिडियो बनाउछन ,यूट्यूबबाट सबै भन्दा धेरै कमाइ गर्ने व्यक्ति बनेका छन् । ४९ + मिलियन सब्सक्राइबर्सको साथमा उनको कमाइ पनि करोडौ पुगेको छ ।